Seddax siyaabood oo kala duduwan ayaad ballan u qabsan karaa
App-ka Alltid öppet. App-ku waxa laga helayaa af-Ingiriiska iyo af-Iswiidhishka. Waxaad u baahan tahay talefoonka gacanta oo Iswiidhan rukun ka ah (abonnemang) iyo lambarka aqoonsiga oo Iswiidhish ah (personnummer).
Adigoo wacaya 08–428 429 02 maalmaha shaqada saacadaha 8- 10 wuxuu kuu furan yahay haddii aad leedahay lambarka aqoonsiga oo Iswiidhish ah (personnummer).
Haddii aadan lahayn lambarka aqoonsiga oo Iswiidhish ah (personnummer) waxaad la xiriiri kartaa rugta caafimaadka si aad ballan u qabsatid.